Officelọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke oge a nnukwu oche L akụkụ akụkụ kọmpụta na drawer.
Na anya nke oge a na nchepụta echiche: tebụl a nwere ahịrị nke oge a na nkecha mara mma nke na-eme ka mma ụlọ ọ bụla.
Atụmatụ 3 Drawers, 3 oghe nchekwa shelf
Isiokwu oge 140x60x76cm
Ejiri desktọọpụ 1 na kọmpụta a nwere akụkụ L, nke gụnyere 3 drọwa na 3 na-emeghe shelf na-enye nnukwu ụlọ nchekwa na akwụkwọ gị, akwụkwọ akụkọ, faịlụ na ihe ịchọ mma ndị ọzọ. kọmputa gị na-agbagharị.
Mee site na osisi E1 gburugburu ebe obibi na lacquer ọcha na-acha ọcha dị elu nke na-eme ka desktọpụ ahụ dị mfe nhicha. A na-arụzi okpokoro okpokoro nke ígwè dị arọ (igwe anaghị agba nchara na agba ọlaọcha), Ejiri ụkwụ iji nyere aka chebe ala. na mbadamba osisi wee nwekwuo ike iguzosi ike na ogologo oge.
Ezubere tebụl kọmpụta l iji mee ka tebụl ahụ na tebụl ahụ na-atụgharị n'ụdị L ma ọ bụ nke kwụ ọtọ.
Nkuku kọmpụta kọmpụta emere maka iji ya na laptọọpụ, mbadamba, na akwụkwọ ederede, zuru oke maka ụlọ ọrụ ụlọ, ụlọ ọmụmụ ụmụaka, ime ụlọ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ịchọrọ icho mma nke na-eji ohere kacha mma.
Ezubere okpokoro kọmpụta a ka ọ bụrụ ebe dị egwu n'ụlọ gị, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọmụmụ gị. Mpempe akwụkwọ dị mfe ma dị mma na-egosipụta ahịrị dị ọcha pụrụ iche. Ọ na-enye ohere ịrụ ọrụ sara mbara nke kwesịrị ekwesị maka ịhazi akwụkwọ na iji kọmputa. Akụkụ nke abụọ na-enye ohere ọrụ ọzọ ma enwere ike idowe ma chekwaa maka ihe ndị ọzọ. Mpempe akwụkwọ a gosipụtara kabinet faịlụ, ihe osise 3 na 3 mepee shelf na-enyere aka idobe ihe gị niile ahazi.
L udi Nke 140x60x76cm
Nnennen size 220x60x76cm
Ihe onwunwe urughuru osisi, elu glossed ọcha lacquered, igwe anaghị agba nchara ụkwụ ọlaọcha
Anapụta ewepụghị maka mfe onwe nzukọ.
Ndị na-emepụta afọ 3 na-ekwe nkwa.
Nke gara aga: Kọmputa oche YF-CD002
Osote: A na-eji desktọọpụ ọmarịcha kọmpụta ụlọ klọọkụ lim na shelf mepere emepe
Ogwe Kọmpụta osisi na ihe osise
Ogwe Kọmputa Kuki na Hutch
Osisi Computer Desk na Keyboard tree
Osisi Computer Desk
Tebụl Computer Table
White melamine home office computer desk with 4 ...